Koox dumar ah oo la sheegay in ay gabdhaha u aruuriyaan dagaalyahanada IS. | Somaliska
Sida lagu soo bandhigay telefishinka SVT waxaa jira koox dumar ah oo ku nool xaafadaha soo galootiga ee Stockholm kuwaasoo gabdhaha da’da yar ka dhaadhiciya in ay u safraan dagaalada ka socda Syria iyo Iraq oo ay ku biiraan ururka IS (Islamic State). Telefishinka oo wareysi la yeeshay Ibrahim Bouraleh oo ah gudoomiyaha ururka Muslimiinta Järva ayaa sheegay in 8 gabdhood oo xaafadaas ku noolaa ay Syria aadeen.
Sababaha ay gabdhaha ugu safrayaan dagaalada ka socda Syria iyo Iraq ayaa ah mid la yaab leh balse markii aan soo wareystay qaar ka mid ah waalidiin ay caruurtooda u safreen dagaaladaas ayay ii sheegeen in muhiimada ugu weyn ay tahay guurka, oo markii gabdhaha ay tagaan wadamaas horay nin looga nikaaxiyo.
Mid ka mid ah aabayaasha uu wiilkiisa u safray Syria ayaa ii sheegay in “gabdhaha la soo dalbado” iyadoo wiilkiisa oo 18 jir ah markii uu tagay Syria gabar horay looga nikaaxiyay.
Kooxda dumarka ah ee ku nool Stockholm ee gabdhaha u diraya dagaalada ayaan la aqoon balse waxaa qaban karqa qaraarka cusub ee Qaramada midoobay ay isbuucii hore ku gaadhay in sharci daro laga dhigo in loo safro ama la taageero dagaalyahanada Syria iyo Iraq. Sweden ayaa balan qaaday in ay dhaqan galin doonto qaraarkaas oo sharciyada wadanka lagu dari doono. Horay sharci daro uma ahayn in loo safro ama lagu biiro IS/ISIL iyo kooxaha la midka ah sida Al-shabaab.